Murairidzi weHighlanders VaMahomed Fathi Vosiya Basa
Vatsigiri veHighlanders vanoti havasi kufara nekusiya basa kwaita murairidzi wechikwata ichi, va Mohamed Fathi, vachiti izvi zvichadzora chikwata chavo mumashure.
VaFathi vanonzi vasiya basa nhasi mushure mekusawirirana nevatungamiri ve Highlanders pamusoro pemari yavo yemuhoro iyo iri kunzi yange isiri kufamba zvakanaka panguva yavanga vachishanda nechikwata ichi.
Vamwewo vanoti vaFathi vange vasinga shande nemazvo sezvo chikwata ichi change chisirikuhwina mimutambo yavo. Parizvino Highlanders iri pa chinzvimbo ye chipfumbamwe pa Premier League Log uye ine mapoints makumi maviri nemaviri.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi reHighlanders, kanawo va Fathi. Mumwe mutsigiri weHighlanders uye ari muwongorori wenhau dzemitambo, vaOmega Sibanda, vanoti chiitiko ichi chashungurudza vatsigiri vazhinji sezvo vange vachifadzwa nemabatiro basa anga achiita vaFathi.